Maapuroni → Anoshanda mbatya • nyanzvi P & M yekushongedza kwemakomputa
MaApril yebasa chigadzirwa chakagadzirirwa zvinoitwa mumaindasitiri akasiyana siyana. Iyo inoshandiswa kudzivirira zvipfeko kubva kune tsvina kana kukuvara. Saizi yavo ndeyeyese, asi inogona kugadziriswa netambo.
Pamusoro pezvigadzirwa zvinoshandiswazve, isu tinewo maapuroni anoraswa akarongedzwa muzvidimbu gumi kana zana, kunyanya anoshandiswa mugastronomy. Muchitoro iwe unowana mamodheru akagadzirwa nemhando dzakasiyana siyana dzezvinhu senge heavyweight donje, polyester, rabha, polypropylene nezvimwe, zvinoenderana nekwaenda.
Zvishandiso zvinoshandiswa ndezvemhando yepamusoro uye zvine zvimwe zvivakwa mune nyanzvi maapuroni Chikamu chikuru chayo chakagadzirwa nezvinhu zvekushambidzika nyore. Isu tinopa, pakati pevamwe, zvigadzirwa, zvekudya uye nzvimbo dzekuuraira.
Isu tinopawo apuroni muchikamu chekupfeka nemaapuroni zvevana kune vadiki vanoda zvekuedza zvekuedza.
Kupa kwemabasa epuroni kunosanganisira:
ye gastronomy uye SPA,
Yakagadzirwa ne polypropylene / PE / PVC / Tyvek,
Gastronomy uye SPA
Iyo inonyanya kufarirwa yekupi ipuroni zvinodzivirira yakatsaurirwa kune yekudyira uye yezvizoro indasitiri. Isu tinopawo anonzi mapuroni - maapuroni mapfupi. Idzo mbatya dzakagadzirwa nedonje uye musanganiswa wedonje uye zvigadzirwa zvekugadzira, zvichibvumira kubviswa kuri nyore kwemavara kubva kuchikafu kana zvipodaidzo, pakati pevamwe. Mavara emicheka anoshandiswa pamaapuroni anowedzera kupera kwakanaka.
Mune maindasitiri aya, aesthetics uye chifananidzo chakanyanya kukosha nekuti vashandi vane hukama hwakawanda nevatengi - zvigadzirwa zvedu zvinoita kuti vanzwe kuve nyanzvi uye kugona. Imwe sarudzo nezvakarukwa iyo logo ichaita kuti iratidzike kubva kumakwikwi uye tsvimbo iri nani mundangariro yemugashi.
Specialised Anti-cheka namano
Epuroni dzemhando yepamusoro Anti-cheka zvakagadzirirwa zvakanyanya indasitiri yezvikafu. Ivo chikamu chemidziyo yemushandi anoita basa rine chekuita nekushanda kwebanga rakanangiswa kumutumbi. Maapuroni akagadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro yesimbi uye simbi mhete system ine dhayamita ye7 mm, inosangana nezvinodiwa zveEN13998 (chikamu 2). Mureza unobvumidza kushandiswa mumamiriro ehutano hwakakosha. Iko kushomeka kwakanyanya kwechinhu ichi kunodzivirira punctures pamuviri.
Maapuroni akakodzera kushanda muhurongwa hweHACCP. Inogona kushandiswa mukugadzirisa mapurasitiki uye dehwe, pamwe nekuparadzaniswa kwenyama kubva pamapfupa. Mugadziri akave nechokwadi chekuti epuroni, kunyangwe hazvo iine chinhu chayo, yaive yakajeka sezvinobvira uye haina kudzora rusununguko rwekufamba.
Maaphron akagadzirwa ne polypropylene, PE, PVC uye tyvek inoitirwa mamiriro ezvinhu apo pane zvinhu zvinogona kukuvadza zvipfeko uye ganda semhedzisiro yekubatana nezvinhu zvakaita semakemikari kana zvinhu zvinotsva. Isu tinopa maapuroni erabhoritari akagadzirwa nepolypropylene nekora yekudzivirira mutsipa, pamwe nemamodeli akagadzirwa e microporous PE laminate yakagadzirirwa kuchengetedza kana uchishanda nezvinhu zvinokuvadza.
Pakati pemapuroni ekudzivirira, pane zvakare maapuroni ePVC ane rubberized, akanyanya kukodzera kushanda muchitoro chebutcher kugadzira nyama isingade banga rinonongedzera kumutumbi. Iko kusimba kunodzivirira zvipfeko kunovimbiswa nechinhu chakakwenenzverwa.
Tinopa apuroni kushanda makambani ane mbiri Leber & Hollman naReis. Iwo mamodheru atinawo ari kutengeswa anowanikwa aine marefu uye mapfupi maoko. Maapuroni ane musanganiswa wemachira epolyester uye donje rinorema zvinokurudzirwa kuti zvishande mukicheni, umo zvipfeko zvinowoneswa netsvina inorema uye inowanzoitika, izvo zvinoda kuwachwa kazhinji patembiricha dzakakwirira, kunyangwe kusvika pa95 degrees Celsius, uku uchichengetedza aesthetics yehembe.
Pamusoro pekicheni, maapuroni akakwana kushanda mune yekuchengetera, mukugadzira, musangano kana mumarabhoritari. Iyo yazvino dhizaini inobvumidza iyo inoyevedza kutaridzika, uye iwo chaiwo madhata anozoratidza anobatsira mukushandisa kwenguva yakareba.
Mhosva yekushanda maapuronimachena epuronivakadzi maapuroni ekushandabasa maapuronibasa maapuroni Allegrodonje basa maapuronivakadzi maapuroni ekushandashanda maapuroni evakadzi Allegroshanda maepuroni ekuchenesabasa maapuroni maciejdzebasa varume maapuronibasa maapuroni evarume allegrokushanda maapuroni mugadziriepuroni yebasa apuronikushanda maapuroni wrocławmbatya dzebasa maapuroni evakadzi